मलेसियामा एक जोडीले लगाएको स्वार्थी माया!! (भिडियो सहित ) - Majdoor Online
मलेसियामा एक जोडीले लगाएको स्वार्थी माया!! (भिडियो सहित )
तिलोचन गौतम / मजदुर अनलाइन
सुजन तामाङ को आवाज मा रहेको स्वार्थी माया बोल को गित को भिडियो सार्बजनिक भएको छ । गत मंगल्बार मिनाश्री फिल्म को अफिसियल युटुब एकाउन्ट बाट उक्त म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको हो । देब लामा को अत्यन्तै मीठो शब्द सृजना मा संगीतकार भेषराज बस्नेतले मर्मस्पर्शी संगीत भरेका थिए भने सुजन तामाङ ले आवाज दिएका थिए ।
केही समय पहिले मलेसिया का विभिन्न स्थानीय मा छायांकन गरिएको उक्त गितको म्युजिक भिडयो मा शंकर के सुनार, कमल नेपाली , ज्ञानु लामा ले म्युजिक भिडियो मा कलाकार को अभिनय गरेका छन ।
भिडियो लाई छायांकन तथा निर्देशन भने सुजन न्यौपानेको ले गरेका थिए । भिडियो लाई बिकास ज्ञवालीले सम्पादन गरेका हुन। उक्त गित मिनाश्री फिल्म प्रा.लि ले बजारमा ल्याएको हो । गित र भिडियो मा कलाकार नया रहेता पनि सक्दो मेहनत गरिएको भएकाले पनि दर्सक स्रोता ले मन पराइ दिनुहुनेछ भन्ने आसा लिएको म्युजिक भिडियो निर्देशक तथा मिनाश्री फ्लिम् का प्रबन्ध निर्देशक सुजन न्यौपाने ले बताए
भिडियो हेर्न तलको लिङ्क थिच्नुहोस्।
Previous: होटल साम्बालामा अखिलको युनियन गठन
Next: मोरङको रंगेली अस्पतालले निशुल्क रुपमा हाईड्राेसिल रोगकाे उपचार गर्दै ।